Apple waxay ka saartay cusbooneysiinta iCloud 12 ee Windows markii ay ku jirtay cilladaha | Waxaan ka socdaa mac
Marka softiweer cusub la sii daayo, had iyo jeer waa kharash in laga yaabo inay ku dhacdo qalad iyo in isticmaaleyaashu ay wax ka qabtaan. Caadi ma ahan, laakiin way dhici kartaa. Tani waa waxa ku dhacay nooca 12 ee iCloud ee Apple soo saartay loogu talagalay nidaamyada hawlgalka ee Windows. Waxay ku jirtay qalad shirkad Mareykan ah ayaa go'aansatay inay ka laabato cusbooneysiinta illaa inta laga xalinayo.
Dhowr maalmood ka hor Apple waxay soo saartay nooca cusub ee iCloud ee loogu talagalay Windows. lambarka 12. Mabda 'ahaan, waxba ma dhici doonaan inay dhacaan oo isticmaaleyaal badan ayaa la cusbooneysiiyaa. Waxaa la socda, iCloud Password ee loogu talagalay Chrome ayaa sidoo kale la bilaabay. Dheeraadkan ayaa u ogolaaday iyadoo la adeegsanayo muuqaalka ereyga 'Apple's keychain password' ee Google Chrome, oo u oggolaanaysa aqoonsiyada la kaydiyay in loo adeegsado biraawsarka gudihiisa Windows-ka. Cilmigii ugu aqoonta badnaa ayaa ku dhex gubtay si uu u arko warka ay keensatay wuxuuna ogaaday in dhibaato jirto.
Gaar ahaan laga soo xigtay 8-bit mala awaal iyadoo ay macquul tahay in dhibaatadu si sax ah ayey ugu jirtaa fidintaas loogu talagalay biraawsarka Chrome. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ogaaday in ka dib kordhinta Chrome-ka la rakibay, lambar laba aqoonsi oo xaqiijin ah ayaa ka muuqday geeska bidix ee hoose ee biraawsarka, iyadoon loo eegin websaydhka la booqday.
Sababtaas awgeed Apple ayaa dib uga noqotay cusboonaysiinta iyo hadda kaliya nooca 11.6.32.0 waa la heli karaa, ma ahan nooca 12, oo tilmaamaya in Apple ay hoos u dhigtay nooca. Aniga oo tixgelinayna in aan ka hadlayno dhibaato xagga amniga ah, waa wax caqli gal ah in Apple ay qaadatay go'aanka ah in ay tirtirto noocaas ilaa ay ka hubineyso, marka hore haddii dhibaatadu jirto, marka labaadna, haddii dhibaatadu jirto, ku bilow iyada oo ku habboon xalka.
Ma garanayno goorta la soo saari karo nooca saxda ah sidaa darteedna dhibaato la’aan. Waan ka war hayn doonnaa haddii wax soo baxaanna waan la socodsiin doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay ka noqotey cusbooneysiinta iCloud 12 ee ku saabsan Windows wixii ku jira cayayaanka